Arantin’ny mpisera Twitter manerantany ny sakafo okrainiana hita any am-pivarotana ao amin’ny toerana misy azy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Septambra 2015 18:39 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Magyar, Español, polski, Italiano, English
Ronono marihitra “Made in Ukraine” [vita ao Okraina] amidy ao amin'ny fivarotana voka-pambolena sy fiompiana iray ao California. Saripikan'i @a_demchenko ao amin'ny Twitter. Namboarin’ i Anna Poludenko-Young.
Mihoatra noho ny firenena iray miady amin'ny amin'i Rosia amin'izao fotoana izao i Okraina na repoblika sovietika taloha iray. Firenena iray misandratra ho mpanondrana voka-pambolena ihany koa izy. Ho fampakaran-danja izany endriky ny firenena izany, dia nanapa-kevitra ny minisitra okrainiana misahana ny fambolena, Oleksiy Pavlenko, hisantatra flashmob [hetsika indray mipika] ao amin'ny Twitter. Niangavy tamin'ny mpanjohy izy hitady vokatra avy ao Okraina any amin'ny mpivarotra voka-pambolena sy fiompiana manerana izao tontolo izao, haka sary azy ireny ary hamoaka ny sary miaraka amin'ny diezy #FoodUA.
Manondrana voka-pambolena amin'ny firenena efa ho 190 izahay! Raha mahita vokatra Okrainiana ianao dia ampahafantaro anay, mamoaha ny sarin'izy ireny! Andao ho afa-mirehareha amin'izany.
Efa ho tapabolana izay no nandefasana ny flashmob, tokotokony ho tamin'ny 5 Septambra teo. Hatramin'izay fotoana izay ny mpisera twitter no namoaka sarin-tsakafo Okrainiana an'arivony any amin'ny fivarotana manerana izao tontolo izao. Ny ankamaroan'ny tsanganana nivoaka dia avy any Etazonia, Alemaina, Letonia, Shina ary Emirà Arabo Mitambatra.
Nandritra ny antsafa nataony tao amin'ny Radio Liberty i Pavlenko niteny fa ny tanjona voalohan'ny fandraisana an-tanana an-tserasera #FoodUA dia ny hampiseho fa manana otrika matanjaka ny seha-pambolena okrainiana. Nilaza ihany koa ny minisitra fa te-handrendrika anganongano anankiroa izy. Tsy maintsy resahina ny finoana malaza eo amin'ny Okrainiana fa mitodika fotsiny any amin'ireo firenena ao amin'ny Firaisamben'ny Repoblika Sosialista Sovietika taloha fotsiny ny fanondranana voka-pambolena ary ny ankamaroan'izy ireo dia mbola amin'akora fa tsy voahodina.
“Nasehon'ity flashmob ity fa mamoaka vokatra efa voahodina maro izahay ary afa-mividy izany any amin'ireo mpivarotra voka-pambolena sy fiompiana lehibe any ivelany aza ianao. Misy tsirony, malaza ary ambony sanda izy ireny,” hoy i Pavlenko.
Manana anjara toerana lehibe amin'izay aondran'i Okraina ny entambarotra ambony sanda
Raha ankinina amin'ny fanadihadiana ireo tsanganana twitter manana ny diezy #FoodUA, dia hita amin'ny dimy malaza indrindra mielipatrana amin'ny sakafo okrainiana ny sôkôlà sy vatomamy (manjaka amin'izany ny marika Roshen, an'ny filoha okrainiana Petro Poroshenko), karazan-degioma rehetra atao vinaingitra, menaka tanamasoandro, saosy voatabia, ary voambarimbazaha mainty.
Menaka tanamasoandro okrainiana ao amin'ny Walmart USA, fikambanam-barotra [supermarket] lehibe indrindra manerantany, ho fanohanana an'i @Pavlenko_OM sy ny #FoodUA
voambarimbazaha mainty okrainiana ao Soisa #FoodUA
#FoodUA Roshen ao amin'ny tsenambarotra goavana Amerikanina. New York.
Zavatra hafa tsy dia malaza indray no ahitana toaka sy voaketsihetsy.
Divay okrainiana misy etona amin'ny talantalana soisa.
“Ny Perlan'ny Inkerman” tamin'ny 2013 eo amin'ny talantalan'ny tranombarotra goavana ao Berlin no manaporofo fa Okraina i Krimea.
Ary ity indray dia voanketsihetsy okrainiana ao amin'ny tsena iray ao Helsinki.
Raha jerena amin'ny isan'ny fanehoan-kevitra sy ny fampitan-kafatra, ny nahatalanjona indrindra ny Okrainiana dia ny sarin'ny sira fahandroan-kanina “made in Ukraine” [vita tao Okraina] hita tao Shipra voapetaka vidy 2,26 Euros ($2,56). Raha tarafina, tsy vonona ny handoa vidin-taharo Okrainiana tena izy amin'ny vidiny eoropeana ny Okrainiana zatra mandoa tsy mihoatra ny $0,16 isaky ny kilaograman'ny (2.2 lb) sira fahandroan-kanina.
Tahaka ny misanda ambonimbony any amin'ny tranombarotra goavana ao Shipra ihany izany sirantsika izany #FoodUA.
Niara-nametraka sarintany ifarimbonana hametrahana fangitra izay toerana [firenena] rehetra nahazoana sary tamin'ny flashmob [hetsika sary indray mipika] ny mpanao gazetin'ny Radio Liberty ao Okraina. Ahariharin'ny sarintany ny efa nivoaka amin'ny sary: Tsikaritra ho hita (sady malaza) manerantany ny sakafo Okrainiana. Tendreo tsirairay ny marika eo amin'ny sarintany raha hijery ny sary ao amin'io toerana notendrena io.
23 ora izayRosia